mercredi, 24 juillet 2019 10:06
Olomalaza: Be mpitia i Michelle Obama sy Bill Gates
Namoaka vokatry ny fanadihadiana nataony ny ivon-toerana YouGov, manana ny foiben-toerany any Angletera any. Mikasika ireo olomalaza sy ankasitrahan’ny olona indrindra ny zavatra ataony ny fanadihadiana nataony. Ho an’ny vehivavy ary dia Rtoa Michelle Obama, vadin’ny filoha amerikanina teo aloha no mitana ny laharana voalohany, arahin’i Oprah Winfrey, izy ity dia mpanentana sady mpamokatra fandaharana malaza amin’ny fahitalavitra amerikanina, ary ilay vehivavy mpilalao sarimihetsika Angelina Jolie no eo amin’ny laharana fahatelo.
dimanche, 21 juillet 2019 16:30
Foloalindahy Malagasy: Mitaiza sy mikolo ny fanahy ihany koa
Manana tarika ara-pilazantsara ny miaramila. «LOVA » na ny « Lalana Omban’ny Voninahitr’Andriamanitra » ny anarany. Ny taona 1989 no niforonany tao Toliara, ary nahazo fankatoavana tamin’ny Etamazaoro Jeneralin'ny Tafika Malagasy ny taona 1999. Feno 30 taona ny «LOVA » ankehitriny, ary ny Adjudant-major Revemo Jean Maksera, efa nisotro ronono, no lehibeny. izay ahitana delagasiona miisa 16 Ankoatrin’ny fanabeazana ara-panahy sahanin’ny fitaizam-panahy misy eo anivon’ny Foloalindahy dia manampy iretsy farany amin’ny fitoriana ny Filazantsara any amin’ireo faritra mena ihany koa ny «LOVA », hisarihana ny fahatokisan’ny vahoaka ny Foloalindahy amin’ny asa sahaniny.
samedi, 20 juillet 2019 19:29
Antananarivo: Miampy iray ny efitrano fijerena sarimihetsika eto an-drenivohitra
Notokanana ofisialy omaly zoma 19 jolay tetsy Andohatapenaka - Antananarivo ny « Canal Olympia ». Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ity fotodrafitrasa vaovao ity, ahitana efitra lehibe fijerena sarimihetsika mahazaka olona 300, ary misy toerana fanaovana seho sehatra ihany koa eo ivelany. Angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro no mamatsy ity toerana ity iray manontolo. Nosoniavina nandritra izao fitokanana izao ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny Canal Olympia sy ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina mba hahafahan’ny Ministera mampiasa ity toerana ity hanosehana ireo mpiangaly ny kanto malagasy.
samedi, 20 juillet 2019 13:01
Sary: Antilin'i Madagasikara
Fitsidihan’i Papa François: Skoto sy mpilatsaka an-tsitrapo 12 000 hirotsaka an-tsehatra amin’ny fandaminana
Niara-nivory tao amin’ny lapam-panjakana Ambotsirohitra ny Talen’ny Seraseran’ny fiadidiana ny Repoblika sy ny birao Foibe Antilin'i Madagasikara notarihan’ny filoha iombonany Manankajaina Agatino, nidinika momba ny fanomanana ny fandraisana ny Papa Ray Masina amin’ny volana septambra ho avy izao. Skoto sy mpilatsaka an-tsitrapo maherin'ny 12 000 no efa nentanin'ny Antilin'i Madagasikara hirotsaka an-tsehatra amin’ny fandaminana ny fahatongavan’i Papa Ray Masina François mandritra ny efatra andro. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 16 juillet 2019 18:05
Johnny Clegg n'est plus
Johnny Clegg nous a quittés à l'âge de 66 ans (Cancer).
Hatao eo amin’ny kianjaben’i Mahamasina amin’ny alahady 11 aogositra izao, ny fanamasinana ho Eveka an'i Mompera Andriantsoavina Jean Pascal. Vao notendren'ny Papa Fransoa ho Eveka mpanampy eto amin'ny Diosezin'Antananarivo ity farany. Pretra diosezanina eto Antananarivo izy, efa « Recteur » ny seminera zokiny fandalinana filozofia tao Antsirabe teo aloha, ary efa « Curé » ao amin’ny Fiangonana “ Notre Dame de l’Assomption ” Imerinafovoany Antananarivo. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 08 juillet 2019 20:47
Katolika - Arsidiosezin’Antananarivo: Voatendry ho Eveka mpanampy Mgr Andriantsoavina Jean Pascal
Notendren’i Papa François, ho Eveka mpanampy ho an’ny Arsidiosezin’Antananarivo i Mgr Andriantsoavina Jean Pascal. Pretra diosezanina eto Antananarivo izy, efa « Recteur » ny seminera zokiny fandalinana filozofia tao Antsirabe teo aloha, ary efa « Curé » tao amin’ny Fiangonana “ Notre Dame de l’Assomption ” Imerinafovoany Antananarivo.
lundi, 08 juillet 2019 20:40
Finoana Katolika: Voatendry ho Evekan’ny Diosezin’i Moramanga i Mgr Rosario Vella
Evekan’ny Diosezin’Ambanja i Mgr Rosario Vella nialoha ny nanendren’i Papa François azy ho Evekan’ny Diosezin’i Moramanga. Mgr Saro no fiantsoan'ny maro azy. Lasa Evekan’ny Diosezin’i Farafangana i Mgr Gaetano Di Pierro Evekan’i Moramanga teo aloha, napetraka tamin’ny fotoana nanandratana ho Olontsambatra an’i Lucien Botovasoa tamin’ny taon-dasa.
samedi, 06 juillet 2019 11:48
Lapan'Andafiavaratra: Misokatra ho an'ny daholobe ny talata hatramin'ny alahady
Misokatra ho azon’ny rehetra tsidihina ireo vakoka malagasy voatahiry ao amin’ny Lapan'Andafiavaratra. Ireo vakoka tsy may tao amin'ny Rovan'Antananarivo no aranty ho azon’ny daholobe tsidihina ao. Mpianatra avy amin’ny sekoly manodidina no nisantatra ny fitsidihana ny Lapan'andafiavaratra ny alakamisy teo, notarihin’ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. Misokatra ho an'ny daholobe ny talata hatramin'ny alahady ny Lapan'Andafiavaratra . (Jereo Sary Tohiny)
Sary: Masoivohon’i Inde
Nisy androany ny hetsika notanterahina teo amin’ny Esplanade Oniversiten’Antananarivo, nentina nankalazana ny Andro iraisam-pirenena momba ny Yoga teto Madagasikara. Nandray anjara tamin’izany ny Ambasadaoron’i Inde eto Madagasikara. (Jereo Sary Tohiny)